Ixesha kunye nabahlobo 56
Sisiphi isifo kunye nantoni na i-bacteria nayo?
Ukugula komzimba yimeko apho umgaqo-siseko wezicubu zomzimba omnye okanye ngaphezulu wezitho zomzimba ungalunganga kangangokuba umgangatho wezinto zelungu okanye ilungu elithile uphoselwe ngaphandle kwesiqhelo. ulwalamano kunye nolunye okanye amanye amalungu. Isiphumo kukuba izinto zendalo azisadibani ngokuhambelana kunye nezinto zomntu-oko kukuthi, kunye nomgaqo wokudibana, womzimba.
Isifo sibangelwa kukutya ngokungafanelekanga, ukusela, ukuphefumla, ukwenza kunye nokucinga okungalunganga. Isifo ngumqobo ekusebenzeni kwesiqhelo kwezinto eziyila kunye nokusebenza kwamalungu omzimba.
Iibacteria yifungi, izityalo eziyimicroscopic, uninzi lweentonga-ezinje nge-lance-like, strope-like. Iibacteria kuthiwa zingunobangela wezifo ezininzi ezosulelayo kunye nezifo ezingosuleliyo, ezomgaqo-siseko.
Ngelixa iibacteria zinento yokwenza nezifo, intsholongwane ayizizo izinto ezibangela isifo. Iibacteria ziphuhliswa nje ukuba imeko zinikezelwe, kwaye ezi meko ziziswa kukucinga okungalunganga, ukusebenza, ukuphefumla, ukutya nokusela. Intsholongwane ngokwenani elaneleyo lokuvelisa izifo ayinakubakho apho umntu engabanikanga umhlaba ochumileyo wenkqubela emzimbeni wakhe. Ngokubanzi, phantse ngendlela efanayo, ukubeka okondweni kunye nokubila kwinkqubo yokugaya kunye neenkqubo zokukhupha esisiseko zizinto eziphambili ezivelisa imeko apho iibhaktheriya zifumana indawo elungileyo kunye nophuhliso.
Yintoni umhlaza kwaye unokunyanga, kwaye ukuba unako ukuphiliswa, yintoni na ukunyanga?
Umhlaza ligama elinikwe iseti yokukhula okutsha okunobungozi emzimbeni womntu, okuthi kukhule ngokuphelelwa zizicubu eziqhelekileyo ezingqongileyo, kwaye oku kungqina ukubulala. Umhlaza sesinye sezifo ezikhoyo ngenkqubela phambili kwempucuko. Impucuko iyazala izifo, ngaphandle kwamanyathelo okhuselo kunye nonyango olusebenzisa iindlela zesifo ebezikho kudala. Okukufuphi nobomi babantu kuku isilwanyana kunye nemvelo yendalo yokuphila okumbalwa kuya kuba zizifo; kodwa okuphezulu xa kuwuphawu lomzimba kunye nokude kukushenxiswa kwimeko yawo elula, kokukhona unokuchaphazeleka kwizifo. Ngaphambi kwexesha, iintlobo zesifo zikhula ngaphambili bezingaziwa, kwaye izifo ezenzeka ngamanye amaxesha ziba rhoqo. Ngaphezulu kokukhula kwengqondo okuchaphazeleka ngakumbi kwisifo umzimba uya kuba phantsi kweemeko ezifanayo okanye ezifana nezomzimba. Kwiminyaka yamashumi asithoba yenkulungwane edluleyo isifo esitsha, esaziwa ngelo xesha ngokuba yi-la grippe, sathi savela saza sasasazeka ngokukhawuleza kwinxalenye enkulu yempucuko yehlabathi. Ngendlela efanayo iimeko zomhlaza kuthiwa ziyanda.
Kukho iseli yomhlaza eyokwasemzimbeni. Zininzi zezi kuwo wonke umntu, kodwa zihlala ziphuhliswa kamva, kwaye ke zihlala zingaqwalaselwanga. Kukho kwakhona intsholongwane yomhlaza, kwaye ayisiyookwasemzimbeni, kodwa yinto ye-astral. Intsholongwane ihlala ikhona emzimbeni we-astral, kodwa iyabanda; Oko kukuthi, ayibangeli ukukhula kweseli yomhlaza. Iimeko ezithile ziyafuneka ukuze kwenziwe umsebenzi kunye nokuphindaphinda kwentsholongwane yomhlaza. Ezimbini kwezi meko zihlala zibubungqina yimeko yomzimba ovuthiweyo, obonakaliswa kwiminyaka yobudala engama-40 nangaphezulu, kwaye imeko yengqondo ibonakaliswa luloyiko. Ke ngoko, uloyiko kunye nobudala beminyaka engamashumi amane bathanda ukuveliswa kweentsholongwane zomhlaza kwaye ke ukukhula kunye nokuphindaphinda kweeseli zomhlaza.
Umhlaza uyanyangeka kwaye sele upholile. Impendulo yalo mbuzo kunye nonyango lomhlaza kuchaziwe ngaphakathi "Amaxesha okuFana nabahlobo" kwiphepha LEELWIMI, Septemba, 1910, Umqu. XI., No.6.